कोरोनाले ‘कलेजो फेल’ हुन सक्ने, खोप कलेजोको सुरक्षा गर्न असक्षम | Ratopati
कोरोनाले ‘कलेजो फेल’ हुन सक्ने, खोप कलेजोको सुरक्षा गर्न असक्षम
कोभिड–१९ भाइरसले विशेषगरी फोक्सोलाई बिगार्न सक्छ । कोरोनाको सीधा असर फोक्सोमा पर्छ । तर, हाम्रो कलेजोमा पनि यसको खतरा उत्तिकै रहन्छ । अमेरिकी युनिभर्सिटी अफ टेनेसीको एक अध्ययनले कोरोना संक्रमित भएका ११ प्रतिशत बिरामीमा कलेजोसम्बन्धी समस्या आउने बताएको छ । कोरोनाविरुद्ध बनाइएका खोपहरु मानिसको कलेजो बचाउन सक्षम नभएको डाक्टरहरुको दाबी छ ।
भारतको म्याक्स हस्पिटलका डा. जतिन अग्रवालले कोरोनाको लक्षण नदेखिए पनि शरीरका अंगहरु खराब हुन सक्ने बताएका छन् । लक्षण नदेखिएका धेरै संक्रमितको पनि कलेजोमा असर परेको उनले बताए । डा. अग्रवालका अनुसार कोरोनाविरुद्ध बनेका खोपहरुले पनि कलेजोलाई सुरक्षा दिन सक्दैनन् । खोपले शरीरमा हुने संक्रमणलाई गम्भीर हुन नदिने मात्रै भएकाले कलेजोमा हुने संक्रमण नरोक्ने उनको भनाइ छ ।